वामगठबन्धनलाई भोट किन ? – गाउँपालिका
वामगठबन्धनलाई भोट किन ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १०, २०७४ समय: ८:१९:५०
के बि राउत
गाईघाट बजार जहाँ बामपंथी बिजयी भए , तुलनात्मक रुपमा यो ठाऊ बिगतको सगरमाथा अंचलकै नमुना सहर बन्यो । यो बिकास क्रम लाई निरन्तरता दिन बाम शक्तिलाई बिजयी गराऊन आवस्यक छ । भने हिजो सुंतला बेचेरै करोडौको ब्यापार गर्ने बेल्टार बजार आज सुनसान छ , यसको ध्वस्त बित्तिय अनी बाणिज्य क्षत्रलाई उकास्न अहीलेको नेत्रित्व परिवर्तन सगै गठबंधन को बिजय अपरिहार्य हुन्छ ।
ब्यक्ति भन्दा नीति प्रधान हुन्छ । राष्ट्र निर्माणमा हामिले तय गरेको बाटो ,दिगो बिकासका साथै नेपाली जनताको स्वभिमान लाई ऊच्च राखेर सार्बजनिक महत्वमा केंद्रित छ । बामपंथीहरूले कसैको निजी बगली बाट , बिदेशी निगाह बाट यस क्षत्रको दीगो र सन्तुलित बिकासको सपना देखेका छैनन् ।
उदयपुरको स्थानीय तहमा बाम पार्टीहरूको दुई तिहाई छ ,भने गठबंधनले मूलकभरी प्रदेश र प्रतिनिधि सभामाँ स्पस्ट बहुमत ल्याउने पक्का छ । तसर्थ यहाँबाट बिजयी उमेद्वार अब बन्ने केंद्रीय क्याबिनेट मन्त्री त्यसै गरी प्रदेशको मन्त्री मण्डलमा समाबेस हुने सतप्रतिसत छ । त्यसैले बामगठबंधन बाहेक अरुलाई भोट हाल्न बालुवामाँ पानी हाल्नु सरह हुनेछ । र अझ स्थानीय तह देखी प्रदेश , केन्द्र सम्म एउटै नेत्रित्व बनाऊदाँ बिकासे कार्यक्रमले मूर्त रुप लीन सहज हुनेछ ।
लोकतन्त्र , गणतंत्र, धर्मनिरपक्षता, संघीयता, सामजिक सुरक्षा, सामंती ब्यबस्थाको अन्त्य, जातिय बिभेदको अन्त्य, महीला अधिकार इत्यादि , सबै कम्यूनिस्टहरूले रगत पसीना बगाएर उपलब्धि प्राप्त गरेका हुन । यसलाई संस्थागत गर्न बामपंथी बाहेक अरुको नेत्रीत्व सक्षम छैन।
१० बर्ष सम्म निर्बाचित अनी ४ बर्ष राष्टीय योजना आयोगमा रहदा सम्म पनी कांग्रेशको नेता गण बाट हाँम्रो पूर्वधार र बित्तीय क्षत्रको बिकास सम्भब रहेन । पहाडी दुर्गम ज़िल्ला भोजपुर , खोटांग संग बिकासको तुलनामा पनी हामी पछी परेका छौ । हिजो हाम्रो क्षत्रमा उच्च शिक्षा , उपचार र जिन्सी आयातका लागी आऊने पाहाडी ज़िल्ला बासीहरू अजकाल सिधै अन्य सहर पुग्छन् । बरु अदुवा , ख़ोर्सानी ,सुगूंरको बच्चा सम्म हामी आयात गर्छौ अनी निर्यात सुन्य छ ,उनिहरु सगको हाम्रो ब्यापार घाटाको ग्राफ बड्दो छ । भने हामी मृत शहरमा परिणत हुदै छौं ।
यस क्षत्रको कांग्रेश नेत्रित्व काला बजारी , ठेकदार,सामन्त, गुण्डा गर्दी र भ्रष्ट कर्मचारिको घेराबन्दीमा परिसकेको छ । सच्चा कार्यकर्तालाई ओझेल पारीएको छ । अब यसको भण्डाफ़ोर गर्न सक्ने प्रतीरोधी क्षमता भएको पार्टी र युवा जमात बामपंथी हरू सग नै छ।
युवा स्वरोजगार, आफ्नो गाउ आफै बनाउ, १ ओडा १० युवाको समुँह , बिघ्यार्थी शैक्षिक लोन जस्ता युवा लाई स्वदेशमै सक्षम बनाई यही रोजगार उपलब्ध गाराउने नीति लीई ४० लाख बिदेशीएका युवा लाई स्वदेश फर्काउने र राष्ट्र निर्माणको योजना ,हाम्रो गठबंधनले गरेको छ।
रू ५० लाख को योजना रू ५००० दीई सिलन्यासको बिकृत अभियान र मानशिकता लाई रोकेर ग़रीब अनी सोझा सीधा जनताको आँखामा छारो हाल्ने कामको अन्त्य गर्दै ग्वयबल्स सैलीको अन्त्य गर्न र जनपक्षीय सरकार निर्माण गर्न हामिले प्रण गरेका छौ ।